मानसिक अस्वस्थता बाट बच्न योग आवश्यक : प्रधानमन्त्री ओली
६ असार, काठमाडौं । मानवसिक अस्वस्थताबाट बच्नको लागी योग आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले बताएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय योगदिवसको अवसरमा आज राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समय निकालेर हरेक मानिसले दैनिक रुपमा योग गर्नु स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुने समेत बताए । “योगको अभ्यास भाषा र लिपी सुरु हुनु भन्दा धेरै अघिबाट सुरु भएको हो ” प्रधानमन्त्रीओलीले भने “मानिस स्वास्थ्य रहनका लागि योगको निरन्तरता जरुरी छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा योगको अभ्यास परम्परागतकाल देखि हुंदै आएका प्रमाणहरु धेरै भेटिएको बताए । “हामीले पाँच/छ हजार बर्ष पहिलेका मूर्तीहरु हेर्‍यौंं भने पनि योगका विभिन्न आशनमा देखिन्छन्” प्रधानमन्त्री ओलीले सो अवसरमा भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको कोशी किनारमा बेदका ऋचाहरुको रचना भएको उल्लेख गरे । “यस्तो ज्ञान भूमीमा बस्ने हामीहरु केही समय पछि पछि परेका हौं तर अब त्यो अवस्था रहदैन ” उनले भने । लोभ मोह र क्रोधबाट मानिसले मुक्तहुनका लागि योग र नियमित ध्यान गर्नु उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई आवेश उत्तेजनातिर लैजान खोजिएको सो अवसरमा बताए । तर त्यस किसिमका प्रयासलाई निस्तेज गरेर सरकार देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
योग दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सन्देश:
– केपी शर्मा ओली-प्रधानमन्त्री
मानिसको तनाव कम गर्नु नै योगको उद्धेश्य
योग ऋषीमुनीकै पाला देखि :
योगका विभिन्न पक्षहरुका बारेमा पनि म जान चाहन्न किनभने हामीसँग समय पनि धेरै छैन् । अहिले मैले भनेर योगसम्बन्धी चर्चा फेरि पर्याप्त हुने पनि होइन ।यसको अभ्यास लिपी बन्न भन्दा अगाडि, भाषा बन्न भन्दा अगाडिदेखि यसको अभ्यास सुरु हुदै आयो । मान्छेले सोध्दै गयो, खोज्दै गयो कसरी मान्छे, यो श्रृष्टिको उत्पतिको बारेमा मान्छेले सोच्यो । जीवन भनेको के हो ?त्यसको बारेमा सोच्यो । र, जीवन कसरी स्वास्थ्य रहन्छ ? आहार, व्यायम, आराम तीन ओटा अथवा बाँच्नका लागि खान, शारीरिक श्रम गर्नु र आराम लिनु । तीन ओटा कुरा आवश्यक छ कम्तिमा । त्यसलाई कति व्यवस्थितगर्न सकिन्छ ।
हामी गीतामा योगको वर्णन पाउँछौं । कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिंदा योगको बारेमा बताएका छन् ।योगको महत्वको बारेमा भनेका छन् । कृष्णले कपिलमुनीको गीतामा वर्णन गरेका छन्, योगी कपिलमुनी जस्तो योगी अथवा कपिलमुनीलाई पतञ्जलीको युग भन्दा पनि धेरै अगाडि पतञ्जलीको युग ई.सं को १सय डेढ सय जसो मानिन्छ । तर, त्यस भन्दा १३ सय वर्षदेखि १५ सय वर्ष अगाडि द्धापरयुगमा कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिंदा योगको बारेमा चर्चा गर्नुभो । त्यो मात्रै छैन् हाम्रा महिनजोदाडो सभ्यता हामीले हे¥यौं भने योगमुद्रामा मुर्तीहरु भेटिन्छ । ५ हजार वर्ष अगाडि । यो अब महाभारतकालीन अथवा द्धापरयुग भन्दा, त्रेतायुग भन्दा पनि अगाडि पर त्यस बेला योगमुद्रामा मुर्तीहरु महिनजोदाडोमाभेटिन्छन् । हाम्रा विभिन्न उत्खनन्हरुमा भएका मुर्तीहरुमा योग भेटिन्छन् ।
हामी पुराना वेदमा गयौं भने वेदले योग र योगीहरुको वर्णन गर्छ । हाम्रा प्राचिनतम् शास्त्रहरुले योग र योगीहरुको वर्णन गर्छ । अन्धकारलाई जतिबेला अन्धकारले छोपेको थियो त्यसबेला अथवा ज्ञानको शुन्यताको जस्तो स्थिति थियो । ज्ञान केही पनि थिएन ।जैवीक इच्छा मात्रै थिए । जैवीक प्रारम्भिक जैवीक इच्छा भनेको बाँच्ने इच्छा । जीजिविषा । बाँच्ने इच्छा जीवको पहिलो संकेत हुन्छ । त्यो मात्रै थियो ।चेतनाको हिसाबले अन्धकारलाई पनि अन्धकारले छोपेको थियो । त्यस बेला एउटा ज्ञानमय वाणी पैदा भयो ॐ भन्ने । ॐ बाट अहम्, भयम् आदिबाट भाषातिर गयो ।संकेतबाट भाषातिर गयो दुनियाँ ।भाषामा सँगसंगै ज्ञानहरु संकलित हुन थाले । ज्ञानहरु संकलन प्रारम्भिक चरणदेखि नै योगा, ज्ञानको मानवीय चेतनाको र ज्ञानको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा आयो । र, त्यसको प्रारम्भ, त्यसको सुरुवात हामीले गर्व गर्न सक्छौं धर्तीको यही भागमा भएको थिए । मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, वेदका ऋचाहरुको रचना यही भएको थियो । वेदका ऋचाहरुको रचना विभिन्न ऋषिमुनीहरुले गण्डकी किनार, कोशी किनारमा गरेका थिए । त्रेतायुगमा वाल्मिकीआश्रम यही छ । वाल्मिकी त्यही बसेर विश्वामित्र, वशिष्ट, कौशिक अरु ऋषिहरु, व्यासको गण्डकी किनारमा वेदको अध्ययन, रचना, संकलन ति चिजहरु गर्ने यही हुन्थ्यो ।
अर्थात सबै भन्दा पहिलो मन्त्र यही बन्यो । भाषा यही बन्यो, लिपी यही बन्यो, सबै यही बन्यो । सबै भन्दा लङ्ग लास्ट, दीर्घजीवि र सबै भन्दा सारगर्वित मन्त्र गायत्री मन्त्र यही कोशी किनार, चतराधाम । त्यसै कारण यस भूमिलाई भनिन्छ, तपोभूमि, ज्ञानभूमि, ध्यानभूमि, देवभूमि । किनभने देवताहरु यही बस्थ्ये । यो देव भूमि हो र ज्ञानको सृजना यही भएको थियो र यहीबाट विस्तार भएको थियो । यसरी हामी गर्व गर्न सक्छौं । हामीले त्यही गरौं व्यक्तिगत तवरमा योगलाई हाम्रा ऋनिमुनीहरुले, जान्नेहरुले पहिलेदेखि आफ्नो जीवन पद्धती बनाए । हामीले ऋषिमुनी हे¥यौं भने झरिला, भरिला देखिन्छन् । ति झरिला, भरिला किन छन् ? बेस्सरी मासु भात खाएर झरिला, भरिला भएका होइनन् । यी नियमले झरिला भरिला भएका हुन् ।खानेको नियम, बस्नेको नियम, आहारको, बिहारको, आरामको, व्यायमको अथवा खानाको र व्यायमको अत्यन्तै सन्तुलित र अहिलेसम्म पनि तीन ओटै कुराको संयोग एकै ठाउँ भएको–योग । शारीरिक व्यायम । व्यायम व्यायम गरेपछि स्वास बढ्छ । अथवा शारीरिक व्यायमको प्रणायामसँग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा जुन व्यायम गर्नुस् स्वास बढ्छ । त्यसले प्रणायम व्यायमसँग सम्बन्धित छ भन्ने देखाउँछ । तर प्राणमा कसरी व्यायमको विधिबाट जसलाई हामी प्रणायम भन्छौं । व्यायमको प्राणसम्बन्धी आयाम, त्यसलाई प्रणायम भन्छौं । त्यो प्राणायम त्यसले सम्पूर्ण रक्तसंचार मात्रै होइन । त्यसले त्यसले मस्तिष्कमा उपयुक्त ढंगले अक्सिजन पु¥याउँने र मस्तिष्कलाई ताजा राख्ने र स्वास्थ्व राख्ने त्यो काम पनि गर्छ ।योगामा यो विशेषता पनि छ र ध्यान, ध्यानमा गएपछि मस्तिष्कलाई जो अतृप्तीबाट, इष्र्याबाट, अंहकारबाट ग्रष्त भएर विकृत हुन्छ अनि डिप्रेसन, डिप्रेसन भन्दा अलि बढ्ता पनि जान सक्छ ।इष्र्या गर्दा, गर्दा, गर्दा, गर्दा, गर्दा, गर्दा मान्छे इष्र्या भावले जलिजलिकन आफैलाई बडो असहज स्थितिमा पु¥याउँछ । तिनीहरुबाट मुक्त गर्ने विषय, मस्तिष्कलाई आत्मनियन्त्रणमा अर्थात मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा भनेको हाम्रा दुईओटा पक्ष हुन्छ, एउटा प्राकृतिक पक्ष अर्को सचेतन पक्ष, वैचारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, बनाएका थिति मुल्य मान्यता विकास गरेका सभ्यताका पक्ष ।
मानिसले विवेक पु¥याउछ:
हृदयबाट होइन,मस्तिस्कबाट बोलिन्छ:
नेपालमा योग दिवस २०३६ सालबाट:
हाम्रो देशले व्यक्तिगत तवरमा उहिले देखि मनाउदै आएको भएतापनि संस्थागत तवरमा ०३६ साल तिरबाट हामीले योग दिवस मनाउने ग¥यौँ । त्यस पछि ०७२ सालबाट हामीले राष्ट्रिय योग दिवस विधिवत रुपमा मनाउने ग¥यौँ । यो राम्रो कुरा हो । आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाईरहेका छौँ । तर यसको अर्थ राष्ट्रिय योग दिवस हुनु हुदैन भन्ने होइन । योगको उत्पत्ति भएको ठाउँमा राष्ट्रिय योग दिवस हुन्छ नै ।
ध्यान दिवस होइन बुद्ध जयन्ती:
साथीहरुले ध्यान दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ । त्यसको अर्थ र महत्वलाई म बुझ्छु । एउटा मात्रै कुरामा अलिकति ध्यान दिनु पर्छ । बुद्ध जन्मिएको वा बुद्धले ज्ञान प्राप्ति गरेको भनेको अथवामहापरिनिर्वाणप्राप्त गरेको दिनलाई ध्यान दिवस हामीले भन्यौँ भने दुनियाँमा ध्यान दिवस जान्छ । बुद्धको जन्म, ज्ञान र मृत्यु त्रियोग दिवस हो, त्यो दिवस जो संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९९ मा पारित गरेर वैशाख २ भनेर सन् २००० देखि मनाउने गरेको छ ।
ध्यानको सम्बन्धमा, योगको सम्बन्धमा आजकल योग अब योगा हुन लागिसक्यो । लगभग योग योग भन्दा योगा हुन लागिसक्यो । जे सुकै होस् आकार लाउनु र नलाउनुले केही छैन, कुरा एउटै हो ।
योगका सबै पक्ष नेपालले जति अरुले बुझ्दैनन्:
त्यस कारण यो ज्ञानभूमि, पुण्यभूमि, तपोभूमि, देवभूमि । यस भूमिलाई त्यसै गरी हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ ।
नेपाललाई कर्मयोगीहरुको देश बनाउनु पर्दछ :
अस्वस्थ शरीर, अस्वस्थ्य मन वचन, अस्वस्थ्य मानसिकताबाट बच्न आफंैलाई अस्वस्थ्य चिन्तन प्रवृत्ति अनेक कुराहरुले ग्रस्त बन्न नदिनबाट जोगाउन योगमा जाउँ । सबैमा यही आव्हान गर्न चाहन्छु र योग दिवस आज देशभरी सञ्चालन भइराखेको छ । अरु तिरका पनि त्यस्तै योगहरु भइरहेका छन् देशभरी देशव्यापी रुपमा । यो योगीहरुको, कर्म योगीहरुकोदेश हो । नेपाललाई कर्मयोगीहरुको देश बनाउनु पर्दछ । योगका विभिन्न पाटाहरु छन् । ति पाटाहरु मध्ये हामी आम जनताको पाटो कर्मयोग हो । योग पनि गर, कर्म पनि गर । यस दिशामा योग दिवसको अवसरमा म शिक्षा मन्त्रीज्यू र उहाँको मन्त्रालयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अरु सबै साथीहरु यसमा लाग्नु भएको छ धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यससम्बन्धी क्रियाशील संघ संस्था र महानुभावहरु सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
२०७६ असार ६ मा प्रकाशित